Somaliland: Guddoomiyaha Hay’adda Dhawrista Tayada JSL Oo Kulamo La Yeeshay Ururrada Warshadlayda iyo Daawooyinka Iyo Go’aamo Kasoo Baxay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Guddoomiyaha Hay’adda Dhawrista Tayada JSL Oo Kulamo La Yeeshay Ururrada Warshadlayda...
Guddoomiyaha Hay’adda Dhawrista Tayada Somaliland Md. Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo ay weheliyaan Guddoomiye ku xigeenkiisa iyo xubnaha Komishanka Dhawrista Tayada somaliland Ayaa xafiiskiisa kulamo gooni gooni ah kula yeeshay ururka iskaashatada warshaydlayda Somaliland iyo waliba ururka ay ku midoobeen ganacsatada ganacsatada ka ganacsatada Daawooyinka.
Markii haddaba Kulankaasi soo dhamaaday waxa saxaafadda la hadlay Guddoomiyaha ururka Warshaydlayda Somaliland oo ka hadlay nuxurka kulankasi daarranaa iyo ahmiyadda uu qaranka u leeyahay waxaanu Guddoomiye Maxamed Sheekh Cumar yidhi: “Waxa maanta noo yeedhay Guddoomiyaha Hay’adda Dhawrista tayada Somaliland. waanu is baranaynay waanan kala war qaadanaynay dee shaqo ayaa naga dhaxaysa sidii aanu u wada shaqayn lahayn baanu ka hadlaynay annaguna annaga oo warshadihii ka socona ayaanu Guddoomiyaha iyo Komishanba u nimid sidii aanu hawsha naga dhaxaysa u qaban lahayn ee aanu isu sii baran lahayn ayaanu isugu nimid. Nolosha dadka iyo dalka qof waliba waa ka masuul oo door buu ku leeyahay sidaa darteed masuuliyadda naga saaran ee labadayada dhinacba aanu wadaagno ayaanu ka hadlaynay”.
Guddoomiyaha Hay’adda Dhawrista Tayada Somaliland Md. Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo isna goobta shirka ka hadlay ayaa ku dheeraaday Muhiimadda uu kulankaasi u leeyahay qaranka iyo dadaalka ay wadaan ee la xidhiidha dhinaca la socodka tayada dhammaanba cunnooyinka iyo daawooyinka dalka soo galaya. Guddoomiyaha Hay’adda Dhawrista Tayada Somaliland Md. Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo arrimahaa ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Marka aanu tayada idinka shaqayno waxa idiin furmaya suuqyo badan oo kale oo aan kaliya ahayn suuqan Somaliland. suuqyada caalamka oo dhan baa idiin furmaya marka aanu idinkala shaqayno tayada agabka aad ka ganacsataan. Waayo waxa aad ka ganacsanaysaan waxa uu noqonayaa wax la hubo oo la baadhay oo heer caalami ah diiradda lagu saaray. Midda kale waxan aad soo saaraysaan ama agabkan ay warshadihiinu soo saarayaan in aynu baadhno si aynu umaddeenii wax aan waxba yeelin aanay u gaadhin. Ama warshad qof muwaadin ahi leeyahay ha noqoto ama warshad qof ajaanib ahi leeyahay ha noqotee waa in aanu soo dhawaynaa oo dhiirri gelinaa oo aynu sinnaan iyo heer sare u samayno dhammaan warshadaha wax soo saaraya oo dhan ayaa annaga naga ballan ah haddii Alle idmo”.
Intaa kadib Guddoomiyaha Hay’adda Dhawrista Tayada Somaliland Md. Muuse Xasan Xaaji Yuusuf iyo ku xigeenkiisa iyo waliba xubnaha Komishanka Tayadu waxa ay la kulmeen ururka iskaashatada daawooyinka Somaliland oo ay ku bahoobeen ganacsadatada ka ganacsatada daawooyinka dalka la keenaa. Markii haddana kulankaasi labaad soo idlaaday waxa saxaafadda la hadlay oo faahfaahin ka bixiyay wixii ay guddoomiyaha ka wada hadleen Guddoomiyaha ururka daawalayda Somaliland Md. Yuusuf Ducaale waxaanu yidhi: “Waxa aanu kulankaasi kaga wada hadalnay annaga iyo Guddoomiyaha Hay’adda Dhawrista Tayada Somaliland Md. Muuse Xasan Xaaji Yuusuf sidii tayada daawooyinka looga wada shaqayn lahaa. Arrintaasina si wanaagsan baa la isugu afgartay annaga oo horeba uga wada hadalnay ballanna nooga taalay imikana la sii adkeeyey arrinkii aniga oo ku hadlaya afka ganacsaada daawooyinka soo dejisa oo ah guddoomiyahoodii waxa aan halkan ka caddaynayaa in aannu diyaar u nahay in aannu la shaqayno hay’adda dhawrista tayada Somaliland”
Sidoo kale Guddoomiyaha Hay’adda Dhawrista Tayada Somaliland Md. Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo isna kulankan ka hadlay nuxurkiisa ayaa yidhi: “Xog-waraysiga iyo macluumaadka aynu kala qaadanay aadbuu muhiim u ahaa ilaahay ha innooga dhigo mid badbaadiya umaddeena wixii wax yeelaya khaasatan daawada. Waxa aanu isla qaadanay oo aanu idiin sheegnay go’aan ka soo baxay hay’adda dhawrista tayada Somaliland oo ah in 1-da February ee sannadka soo socda ee 2019 daawo bilaa dhukumanti ah ama daawo aan lahayn shahaado original ah in aanay Jamhuuriyadda Somaliland soo gali Karin. Go’aankaasi waan isla qaadanay waana go’aan aannu qoraalkiisii idiin soo gudbinayno laamaha dawladda ee ku shaqada lehna aynu la socodsiinayno”.